Eenyuutu jechoota shanan tana narraa fudhatee itti dalaga? - NuuralHudaa
Eenyuutu jechoota shanan tana narraa fudhatee itti dalaga?
Last updated Feb 26, 2018 1,711
Qophii: Abbaa Muhammad (Jafar Bayaan)
Abuu Hureeyraan akki je’u, Rasuulli sallallaahu Aleeyhi wasallam “eenyuutu jechoota kana narraa fudhatee isiitti dalaga ykn isii tana nama itti dalaguu barsiisa?” nuun je’e. Abuu Hureeyraan Ana Yaa Ergamaa Allaah je’een, Rasuulli ﷺ harka kiyya qabee shan naaf lakkaawe “Haraama irraa fagaadhu, nama akkaan Rabbi gabbaru taataa, Waan Rabbiin siif qoode jaaladhu irra dureeysa namaa taataa, ollaa keetiif tola oli Mu’mina taataa, waan ifii jaalattu ilmaa namaatiif jaaladhu Muslima taataa, kofla hin guddisin kofla guddisuun qalbii ajjeesaa” naan je’e. Hadiisa kana Tirmiizii fi Imaamu Ahmadtu baase.
Hadiisa kana keeysatti gorsa guddaatu jira. Rasuulli ﷺ nama isii tana baratee itti dalaguu fi nama isii tana nama barsiisu gaafannaan Abuu Hureeyraan Ana je’ee irraa fudhate.
1. Waan haraamaa irraa if eegi nama akkaan Rabbi gabbaru taata:
Haraamni waan Rabbiin dhorge hunda, waan dhorgame dalaguu fi kan ajajame dhiisuun haraama. Wanti haraamaa kuni Qur’aanaa fi Hadiisa keeysatti ifa bahee jira. Sanirraa: Shirkii, Lubbuu namaa baasuu, hatuu, Zinaa, nama walitti buusuufi oduu nama jidduu oofuu, kijibuu, nama ganuu, ragaa kijibaa bahuu, Ribaa nyaachuu, Haadhaa fi Abbaa ifii muruu, fira muruu, farshoo dhuguu, falfala dalaguu fi itti dhaquu, waan kana malee jiru hedduu irraa fagaatuun sadarkaa nama sanii ol fuutee irra caalaa nama Rabbi gabbaruu keeysatti isa ramaddi.
Irra caalaan wanni Rabbii ifii ittiin gabbaranii waan inni irraa dhorge irraa fagaachuuni.
2.Waan Rabbi siif qoodee jaaladhu irra dureeysa namaa taata:
Durummaan guddoon durummaa qalbiiti, namni jiruu duniyaa tanarratti haalaan gammachuu qabu, nama waan Rabbiin isaaf qoode san jaalate. Irra hedduun namaa qabeenya kan qabu tahuu agarta, garuu hiraar isaa dhumaa hin qabu, magaalaan dhabamte, wanni akkasii ol kaate, san godhu malee tun badde osuma je’u gammachuu waan je’amu osoo hin agarre duniyumaaf hiraaraa jiraata. Qalbiin Isaa miskiina, garuu qabeenya qaba.
Gammachuun dhugaa waan Rabbi namaaf qoodeen quufanii, Akhiiraa dalagachuun argamti.
Rabbiin ol tahe akki je’u:
“Warra Amane qalbiin Isaanii Zikri Allaahaatin raggaati (gammachuu argatti), dhugumatti Zikrii Allaahatiin Qalbiin sabatti.” Ar-Ra’ad: 28
Namni waan Rabbiin isaaf qoodeen quufee gammade, irruu alaa eegaa olu hin qabuu nagayaan jiraata, namni qooda Rabbii isaatiin quufuu dadhabde irruu zalaalam hin guuttamnen guutatti gammachuu dhabee duniyumaaf bolalaa jiraata.
3.Ollaa keetiif tola olii Mu’mina taata:
Ollaaf gaarii tahuun mallattoo Iimaanaa irraahi. Wanni ollaaf tola olaniin hedduu. sanirraa:
hamtuu ifii irraa qabachuu,
rakkoo isaa obsuufi,
haajaa isaa bira dhaabachuu,
iccitii fi eybii isaa dhoysuu fi
gaarii isaaf dhaamuudha.
Ollaan Kee Muslima tahu haqa ollummaa fi haqa obbolummaa Islaamaa sirraa qaba.
Ollaan kee Kaafira tahu haqa ollummaa sirraa qaba. Gaarii malee hamtuu itti dalaguu hin qabdu.
4.Waan ifii teetiif jaalattu namaaf jaaladhu Muslima taata:
Guutuminna Iimaanaa irraa inni tokko waan ifiif jaalatan namaaf jaalachuudha. kun Haala bareedaa Muslimni ittiin faayamuu qaburraahi.
5.Kofla hin guddisin, Kofli heddumaatu qalbii ajjeesa:
Waan hundaaf koflaatuma oluun qalbii namaa zikrii irraa shaagala, suni qalbiin akka goggoydu godha.
Ammoo ilmi namaa koflu fi tapha isa gammachiisurraa hin duroomu, garuu sanuma qofa kaayyoo godhatanii ganamaa fi galgala waanuma itti koflan qofa barbaaduun qalbiin goguu irraahi.
Rasuulli ﷺ Sahaabaa wajjiin qoosaa godhee jira, ammoo haqa malee hin dubbatu. Hoggaa hunda fuula ifaa taheen seeqaati Sahaaboota qunnama. Hadiisa keeysatti wanni jiru “Fuula obboleeysa keetii seeqaa qunnamuun Sadaqaadha” Ammoo koflaa oluu miti. Suni qalbiin du’uu irraahi. Nama biratillee namni akkasii kabajaan irraa fuudhamti.
Rabbiin warra jechootii tanaan fayyadamu nu haa godhu.
May 18, 2022 sa;aa 5:47 am Update tahe